China 1600mm Meltblown Nonwoven Fabric Making Machine orinasa sy mpamatsy | ICT
Fitaovana maimaim-poana, Fanohanana ara-teknika, Fanohanan'ny Internet
1-1.5 taonina / 24 ora, raha miova ny lanjan'ny grama vokatra, dia miova arakaraka ny lanjan'ny famokarana
4. Manana milina 1 taona ho an'ny milina ny milina, garantiana 2 taona ho an'ny ampahany amin'ny herinaratra. Mandritra ny taom-piantohana raha misy tapany tsy notapahin'olombelona. Homena maimaimpoana izahay hanoloana ny vaovao ho anao. Hanomboka ny fiantohana aorian'ny fandefasana ny masinina azontsika ny B / L.
2: Mahazo injeniera ve ny injeniera?
T / T avy amin'ny kaontin'ny bankintsika mivantana, na amin'ny alàlan'ny serivisy fikatsahana ara-barotra Alibaba, na avy amin'ny West Union, na vola.
Previous: Masinina feno ply matevina 3 ply flat
Manaraka: PP Melt tsofina vita amin'ny fanamboarana lamba tsy madinidinika ho an'ny lamba vita amin'ny masika tsy miasa
PP Melt tsofina vita amin'ny milina fanamboarana lamba tsy roa?